Ukwehluka nokuhlangana kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Okwe meteorology, kunemiqondo eminingana ebaluleke kakhulu. Zimayelana nokuhlangana futhi kwehluka. Uma sifuna ukukhuphula izinga nokunemba kwesimo sezulu, kufanele sazi ukuthi singahlaziya kanjani lezi zimo. Namuhla sizosebenzela ukwazi incazelo yalezi zimo namandla ezinawo. Ngaphezu kwalokho, sizobona ukuthi sithinta kanjani isikhathi nokuthi singazibona kanjani.
Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngokuhlukahluka nokuhlangana? Sizokuchazela konke ngokuningiliziwe.
1 Kuyini ukuhlangana nokwehlukana
2 Inqubo yokunyakaza komoya
3 Ukwehluka kwe-Altitude
4 Isipiliyoni nomoya
Kuyini ukuhlangana nokwehlukana
Uma kushiwo emkhathini ukuthi kukhona ukuhlangana, sikhuluma ngokuchotshozwa komoya endaweni ethile ngenxa yokuhamba kwawo. Lokhu kugayeka kubangela ukuthi umoya omkhulu uqoqane endaweni ethile. Ngakolunye uhlangothi, ukwehluka kuphambene. Ngenxa yokuhamba kwenqwaba yomoya, iyasakazeka futhi inikeze izindawo ezinomoya omncane kakhulu.
Njengoba kungaqagelwa, lezi zimo zithinta kakhulu ingcindezi yasemkhathini, ngoba, lapho kunokuhlangana khona, kuzoba nengcindezi ephezulu yomkhathi bese kuthi ephansi kwehlukane. Ukuqonda ukusebenza kwalezi zenzakalo kufanele wazi kahle amandla emoyeni anawo emkhathini.
Ake sicabange isifunda lapho sifuna ukuhlaziya umoya nemisinga. Sizodweba imigqa yesiqondiso somoya ebalazweni ngokususelwa ekucindezelekeni komkhathi. Umugqa ngamunye wengcindezi ubizwa ngokuthi ama-isohipsas. Lokho, imigqa yengcindezi elinganayo yomkhathi. Ezingeni eliphakeme kakhulu lomkhathi, eduze ne- ukuyeka kancane, umoya cishe yi-geostrophic. Lokhu kusho ukuthi kungumoya ojikeleza ngendlela eqondana nolayini abalinganayo bokuphakama komhlaba.
Uma esifundeni esingaphansi kwesifundo sibona ukuthi imigqa yokugeleza komoya iyahlangana, kungenxa yokuthi kukhona ukuhlangana noma ukuhlangana. Ngakolunye uhlangothi, uma le mizila yokugeleza ivuleka futhi iqhelelana, kuthiwa kukhona ukwehluka noma ukusabalala.
Inqubo yokunyakaza komoya
Sizocabanga ngomgwaqo omkhulu ukuze sibe nalokhu kushisa okungaphezulu. Uma umgwaqo omkhulu unemizila emi-4 noma emi-5 futhi ngokungazelelwe iba yimizila emi-2 kuphela, sizobe sanda ithrafikhi endaweni enemizila embalwa. Okuphambene kwenzeka lapho kunemizila emibili futhi kungazelelwe kunemizila eminingi. Khona manje, izimoto ziqala ukuhlukana futhi kuzoba lula ukunciphisa isiminyaminya. Yebo, okufanayo kungachazwa ngokwahluka nokuhlangana.
Esinye sezimo lapho kungenzeka khona ukuthi kube khona ukuphakama nokwehla kwenqwaba yomoya kubonakala lapho kunobudlelwano nomoya we-gradient. Isivinini esithwalwa yimimoya ekhuphukayo nesehlayo iphakathi kuka-5 no-10 cm / s. Okufanele sicabange ukuthi, ezindaweni lapho kuhlangana khona umoya, sizoba nengcindezi ephezulu yomkhathi, ngakho-ke ubukhona be-anticyclone. Kule ndawo sizoba nesikhathi esimnandi futhi sijabulele amazinga okushisa azinzile.
Ngokuphambene nalokho, endaweni lapho kuhlukana khona umoya, sizothola ukuncipha kwengcindezi yasemkhathini. Indawo isala nomoya omncane. Umoya uvamise ukuya endaweni lapho unengcindezi encane yokugcwalisa izikhala. Ngalesi sizathu, le minyakazo yomoya ingadala isishingishane noma ifane nesimo sezulu esibi.
Umphumela wokushayisana okhona lapho kuhamba umoya uzungeze izingcindezi eziphakeme noma eziphansi, kucatshangelwa ukuthi ukungqubuzana uqobo kubangela ukuphambuka lapho kuqondiswa khona umoya, ukukhiqiza ukwehluka noma ukuhlangana. Okusho ukuthi, into ekhomba ijubane ngokuya ngama-isobars yilelo elivela emoyeni elingena maphakathi nengcindezi ephansi noma elixoshwa ngaphandle uma kunengcindezi ephezulu.
Ngokwehlukana, imisinga yomoya ihlukana ibe ukugeleza okubili okuqala ukuhambela kude ngezindlela ezihlukile. Uhlelo olulawula lokhu kusakazwa okujwayelekile komkhathi luyathinteka kulezi zinto. Lapho sinokuhluka, imimoya iyashintshwa emazingeni amabili: ukuphakama nokulingana nomhlabathi. Ukudlula komoya kusuka endaweni eyodwa kuya kwenye kuyenziwa kubheke phezulu. Lokhu kunyakaza komoya kuvusa ukwakheka kwalokho okwaziwa njengeseli. Uma ukuhlangana kungaphansi, uquqaba lomoya luqala ukukhuphuka ngobude. Lapho zifinyelela endaweni ethile ephakeme, zehlukanisa zibe ukugeleza okubili okuzoya kolunye uhlangothi.
Uma lokhu kugeleza komoya kuqala ukwehla, kufinyelela endaweni yokuhlangana futhi, eduze komhlaba, sithola enye indawo yokuhlukahluka okusha lapho kubangela khona ukuthi imisinga yomoya ihambe iye kolunye uhlangothi iye kuleyo abayenze phezulu. Nakhu ukuthi isekethe noma iseli livalwa kanjani.
Ukwehluka ebangeni eliphakeme kuvamise ukwakheka ezindaweni ezihlangana nezindawo eziphakathi komhlaba kanye nasezindaweni ezibandayo. Kulezi zindawo, ukugeleza komoya kuthinteka emazingeni okushisa asezingeni eliphakeme nobungako bawo. Konke lokhu kunyakaza kwakha uhlelo lwamaseli ama-3 amakhulu atholakele ezenza kube nohlelo lapho umoya uqala ukunyakaza ubheke phezulu.
Uma okuhlangenwe nakho kungasizuzisa, kungenxa yokuthi lapho siseduze kogu lolwandle kuvame ukuhlangana okuningi okubangela ukuvuselelwa okungafika kumamitha ayi-8.000 ukuphakama. Kungaleso sikhathi lapho sikuleyo ndawo ephakeme, sicindezelwe ngama-milligar angama-350, lapho ukwehluka okuphawulekayo kuqala ukwakheka.
Uma sibona ukudangala noma isiphepho futhi sisezingeni lolwandle, kungukuthi kukhona ukuhlangana komoya. Lokhu kuncipha kwenqwaba yomoya kuyaphoqa ukuthi ivuke ime mpo, ngenkathi ipholile futhi ijiya. Njengoba umoya okhuphukayo ujiya, ziveza amafu emvula, ikakhulukazi uma ukuphakama kwenqwaba yomoya kume mpo ngokuphelele.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngemibono yokwehlukana nokuhlangana kanye nokubaluleka enakho kwizimo zezulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Ukwehlukana nokuhlangana
UJuan Manuel Sanchez kusho
Lapho kunokwehluka kwemimoya ngaphezulu, ingcindezi yasemkhathini ngaleso sikhathi iba phezulu, ngoba ngaleso sikhathi kuba khona ukuncipha kwemimoya, okungukuthi, imimoya yehla ime mpo. Lapho le mimoya ifinyelela phezulu iyahamba iyofuna izikhungo ezinengcindezi ephansi, lapho i-Wind Convergence ingenzeka khona, futhi kungenxa yale ngcindezi ephansi ukuthi imimoya ingakhuphuka ime mpo.
Kodwa-ke, lapho ubhala lesi sigaba (ngisho nasezigabeni zakamuva):
“Njengoba ungaqagela, lezi zimo zithinta kakhulu ingcindezi yasemkhathini, ngoba, lapho kunokuhlangana khona, kuzoba nengcindezi ephezulu yasemkhathini futhi kwehluke okuncane. Ukuze uqonde ukuthi lezi zenzakalo zisebenza kanjani, umuntu kufanele azi kahle amandla omoya osemkhathini. "
ubhala inqubo ephikisanayo, usho ukuthi kunezingcindezi eziphakeme lapho kukhona ukuhlangana kwemimoya, nezingcindezi eziphansi ngokwehluka kwemimoya.
Ngaphandle kokuthi ubhekise ekuguqulweni nasekuqhamukeni okwenzeka hhayi ngaphezulu kepha phezulu emoyeni. Uma kunjalo, ngicabanga ukuthi kufanele ukucacise lokho, ngoba kuzitshengisa ukungaqondakali!
Ngokufanayo, okuthunyelwe okuhle kakhulu!
Ukubingelela okuvela eColombia!
Phendula uJuan Manuel Sánchez